October 18, 2020 122
एजेन्सी । हामी विश्वकै मानिस नीति तथा जीवन शास्त्रमा एकदमै विश्वास गर्छौ । धार्मिक ग्रन्थहरु भन्दापनि निक्कै माथी हुन्छन् नीतिशास्त्र । हामीले अहिले कुरा गरिरहेको चै चाणक्य शास्त्र हो ।
यो विश्वकै मानव जीवनमा अति जरुरी बनेको छ । यसैले दुनियाँले नै यसको प्रयोग गरिरहेका छन् । चाणक्यको नाम विभिन्न शास्त्रमा एकदम सम्मानका साथमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ।
चाणक्यनीति बचन विश्व भरि नै प्रचलित बिधि हो। चाणक्य पाटलीपुत्रका विद्वान थिए। चाणक्यनीति बचनले हर कोहिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन मदत गर्छ।चाणक्यको वचनलाइ हाल सम्म पनि कसैले इन्कार गर्न सकेका छैनन्।
उनले भने अनुरुप दिनको सुरुवात गर्नाले दिन सोचेको भन्दा पनि राम्रो संग बित्नेछ। आज हामी चाणक्य नीति अनुरुप बिहान उठ्दा कस्ता बस्तुहरु देख्नु अशुभ हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिदैछौ। कुन–कुन बस्तुहरुलाई बिहान उठ्दा देखियो भने नराम्रो हुन्छ त ?
चाणक्यनीति अनुसार बिहान उठ्ना साथ आफ्नै कसैसंग झगडा पर्नु भनेको एकदम गलत काम हो। तर यदि बिहान उठ्ने बित्तिकै कुकुर , बिरालो तथा अन्य कुनै जीव जनावरको बिचको झगडा देख्नुलाई अत्यन्तै अशुभ मानिन्छ।
यस्तो देखेमा उक्त दिन संकटका साथमा व्यतित हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसैले गर्दा झगडा भईरहेको स्थानबाट केहि टाढा जानु नै उचित हुन्छ।
चाणक्यनीतिका अनुसार जसरी हामी बिहान उठ्दा आफ्नै अनुहार देख्नबाट ऐना देखी टाढा हुनु पर्छ त्यस्तै गरि अरु कसैको अनुहार पनि देख्नु अशुभ हुन्छ। यदि यसो भएमा इष्टदेवको ध्यान गर्नु पर्दछ।
साथ–साथै भगवानको नाम स्मरण गर्दै उठ्नाले शरीरमा सकारात्मक उर्जा बढ्नुका साथै दिन समेत राम्रो संग बित्ने मान्यता रहीआएको छ।
चाणक्यनीतिमा उल्लेख भएअनुसार जब हामी बिहानीको नास्ता गर्छौ तब हामी दिनभरी नै स्फूर्ति र ताजगीको अनूभूत गर्छौ। बिहानको समयमा नास्ता गर्नु भन्दा पहिले भुलेर पनि कुनै जीव जनावर तथा गाउँको नाम लिनु हुदैन।
शास्त्रका अनुसार यी सबै गर्नुभन्दा बरु हत्केलालाई जोडेर आफ्नो हस्तरेखा हेर्नुलाई शुभ मानिन्छ।
Prevयी हुन दूधमा बेसार हालेर पिउँदा शरीरलाई हुने फाइदा
Nextकाठमाडौँको सामाखुशीमा बसको ठक्करबाट एक पैदल यात्रुको मृत्यु भएको छ ।
बास्तविकता खुल्यो बिस्कुटको कार्टुनमा भेटिएको बच्चाको ? काठमाडौँमा झाडीभित्र कसले फाल्यो बच्चा(भिडियो) (2226)